WordPress Jetpack Shortcode အကျယ် | Martech Zone
WordPress ကို Customize Jetpack Shortcode အကျယ်
ကြာသပတေးနေ့, သြဂုတ်လ 29, 2013 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2015 Douglas Karr
WordPress ကိုဖြန့်ချိတဲ့အခါ Jetpack ပလပ်ဂင်တစ်ခုသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် WordPress ထည့်သွင်းမှုကိုဖွင့်ပြီး၎င်းတို့သည်သူတို့၏ hosted ဖြေရှင်းချက်တွင်ပါ ၀ င်သောထူးခြားသောလက္ခဏာများကိုဖွင့်ခဲ့သည်။ သင်ပလပ်အင်ကိုဖွင့်ပြီးပါက၊ သင်အပါအ ၀ င်၊ ကုဒ်တို။ ပုံမှန်အားဖြင့် WordPress သည်သင်၏ပျမ်းမျှစာရေးသူအားစာမူတစ်ခုသို့မဟုတ်စာမျက်နှာတစ်ခု၏ content အတွင်းမီဒီယာ scripting များထည့်သွင်းခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ။ ၎င်းသည်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပြီးသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှုပ်ထွေးမှုအခွင့်အလမ်းများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
သို့သော် shortcodes များနှင့်အသုံးပြုသူသည်မီဒီယာကိုအလွယ်တကူ embed လုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Youtube ဗီဒီယိုတစ်ခုကို embed လုပ်ရန် embed script ထည့်စရာမလိုပါ။ သင်မျှဝေထားသော URL ကိုဗွီဒီယိုတွင်စာသားတည်းဖြတ်သူ၌ထည့်လိုက်သည်။ Shortcodes ၏ပေါင်းစည်းမှုသည်လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်ပြီး URL ကိုအမှန်တကယ်ဗီဒီယိုကုဒ်ဖြင့်အစားထိုးသည်။ အဘယ်သူမျှမပျော့သွားတာမရှိကိစ္စများ!
တစ်ခုကလွဲရင် Shortcodes ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ embedded media ၏အကျယ်သည် default အတိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် Youtube ဟာသင့်ရဲ့ content ရဲ့အကျယ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးသင်၏ sidebar မှာဖြန့်ကျက်နိုင်သည် - Slideshare သည်၎င်းသည်ယူနိုင်သောနေရာ၏ထက်ဝက်ကိုယူလိမ့်မည်။ တိကျတဲ့ဖြတ်လမ်းတစ်ခုစီရဲ့အကျယ်ကိုအလိုလိုက်ဖို့အချို့သောစီစစ်စက်များကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုကြိုးစားရှာဖွေဖို့အချိန်အနည်းငယ်ကုန်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ငါထွက်ရှိပြီးသားတ ဦး တည်းရှိခဲ့သည်ရှိမရှိကြည့်ရှုရန် plugins ကိုတစ်တန်ပြန်လည်သုံးသပ်။
ပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ API ထဲကို WordPress ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့တောက်ပတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုပါ။ သင်၏စာမျက်နှာများနှင့်စာမူများပေါ်ရှိအကြောင်းအရာအကျယ်ကိုသင် default အနေဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
လျှင် (! isset ($ content_width)) $ content_width = 600;
ဤအကျယ်ကိုကျွန်ုပ်ဆောင်ပုဒ်၏ functions.php ဖိုင်ထဲ၌ထည့်လိုက်သည်နှင့် embedded shortcut မီဒီယာအားလုံးကိုအရွယ်အစားပြောင်းလိုက်သည်။ ငါက code တစ်ခုလိုင်းယူသောကြောင့်ငါပျော်ရွှင်နေစဉ်, ငါကကြီးမားတဲ့ frazzled ငါဒီရှာဖွေရန်ဤမျှလောက်ကြာမြင့်စွာယူခဲ့ပါတယ်။ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှုမရှိခြင်း Jetpack။ ဥပမာအားဖြင့် Shortcodes ကိုပိတ်။ မရပါ၊ ၎င်းသည်ပလပ်အင်ဖွင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးဖွင့်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်အများဆုံးပေါင်းထည့်ရန်မှာတောက်ပနေလိမ့်မည် အကျယ်နှင့်အမြင့် setting ကို တိုက်ရိုက်အပေါ် Jetpack Shortcode ဆက်တင်များ WordPress သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်အဖြေရှာခြင်းသည်နည်းနည်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။
Tags: အမြင့်Jetpackကုဒ်တိုများslideshare အကျယ်vimeo အကျယ်width ကိုWordPressyoutube အကျယ်
သင်၏ WordPress ဆိုက်ကိုမီးလျှံအနည်းငယ်ပေးပါ